Guddoomiyaha aqalka sare iyo Deni oo xalay kulmay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Guddoomiyaha aqalka sare iyo Deni oo xalay kulmay
Guddoomiyaha aqalka sare iyo Deni oo xalay kulmay
Madaxweynaha dowladd goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay hoyga uu Garoowe ka degay ku booqday Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdillaahi.
Madaxweyne Deni iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare, ayaa sida wararku sheegayaan waxay ka wada-hadleen xal u helidda Khilaafka ka taagan Arrimaha Doorashada 2020/2021, gaar ahaanna Guddiga Doorashooyinka heer Somaliland.
Waxa jirta in Guddoomiye Xaashi uu si adag u diiddanyahay, Guddiga dowladda Federaalka Soomaaliya u magacowday Doorashada Xildhibaannada Labada Gole ee laga soo doorto Somaliland, islamarkaana uu dalbaday in la kala diro Guddigaas.
Madaxweynaha Puntland iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare, waxa la sheegay in ay ka midaysan yihiin Ra’yiga la xiriira kala diridda Guddiga soo dooranaya Xildhibaannada heer Federaal ee ka yimaada Somaliland.
Guddoomiyaha aqalka sare iyo Deni oo xalay kulmay was last modified: December 29th, 2020 by Admin
Toddobo qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose
Sacuudiga oo xukun ku riday haweeney u ololeysa xuquuqda haweenka
Dagaal dhex-maray Al-Shabaab iyo Kooxda Macaawiisleey gobalka shabeelaha hoose